Breakingnews;कोरोना अब समुदायमा – Media Np Online
मुख्य पृष्ठ /News/Breakingnews;कोरोना अब समुदायमा
काठमाडौं : बर्दिया, राजापुर–५ बदालपुरकी बालिका घरबाट निस्केपछि कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुन पुगिन्। उनी हजुरआमासँग छिमेकी जिल्ला कैलाली गएकी थिइन्। घर फर्कन नपाउँदै क्वारेन्टाइनमा बसेकी ती ११ वर्षीया बालिकाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
सीमावर्ती सहर नेपालगन्ज–७ का एक शिक्षकको दोस्रो पटकको पीसीआर परीक्षणमा पनि पोजेटिभ रिपोर्ट आएको छ। उनी भारतको नानपाराबाट स्वदेश फर्केपछि क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए। क्वारेन्टाइनमा बस्न नमानेर कतिपय भागे। कोरोना भाइरस संक्रमण भएको थाहा नपाउँदा उनले धेरैलाई पढाए। उनीबाट फैलन सुरु भएको संक्रमण अहिले २४ जनामा पुष्टि भइसकेको छ। सब संक्रमितको खजुरास्थित सुशील कोइराला परोपकार क्यान्सर अस्पतालको आइसोलेसनमा उपचार भइरहेको छ।
प्रदेश ५ को सीमावर्ती जिल्ला सम्मरी गाउँपालिका र लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा भेटिएका आधा दर्जनभन्दा बढी संक्रमित सीमापारि भारतबाट लुकेर नेपाल आएको स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख डा. राजेन्द्र गिरीले बताए। त्यस्तै, कपिलवस्तु जिल्लामा अग्रपंक्तिमा रहेर कार्यरत २५ वर्षीया स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ पाइएको छ।
उता, पर्सा जिल्लामा समाचार संकलनमा खटिने दुई जना सञ्चारकर्मीमा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएको छ। भारतबाट आएका जमाती समुदायबाट पूर्वी जिल्लामा संक्रमण फैलन पुगेको छ।
यी माथिका घटना प्रतिनिधिमूलक हुन्। यी घटनाक्रमले कोरोना भाइरसको संक्रमण तेस्रो चरण अर्थात् समुदाय तहतर्फ तीव्र गतिमा बढेको विज्ञहरू बताउँछन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल भन्छन्, ‘पीसीआर परीक्षण सीमित भयो। जनतालाई भुलाउन बल्छी थापेर हुँदैन। संक्रमण समुदाय तहमा गइसकेको छ। तत्काल ट्रेसिङ नगर्ने हो भने अवस्था भयावह हुन सक्छ।’
संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले लकडाउन घोषणा गरे पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। ‘लकडाउनको पूर्ण कार्यान्वयन भएको छैन। पीसीआर परीक्षण पनि अपेक्षाअनुसार विस्तार भएको छैन। ट्रेसिङ पनि सुस्त गति छ। ट्रेसिङ र पीसीआर परीक्षणको द्रुत गतिमा गर्न सकेको भए समुदाय तहमा कति धेरै गइसकेको छ भन्ने प्रस्ट चित्र आउँथ्यो,’ डा. प्याकुरेलले भने।
एक वर्षभित्र कोरोना विरुद्धको खोप तयार हुने
कोरियामा रहेका स्याङ्जाका युवाको सुतेकै अवस्था मृत्यु
पोखरामा एकजना कोरोना संक्रमितको मृत्यु